Brezila mitaratra labozia mibilaogy China Manufacturer
Description:Ny mari-pamantarana baoritra any Brezila,Brazil Pavement Markings,Fitsipika momba ny lalana mankany Brezila
Home > Products > Hazo fanondronam-bolo > Brezila mitaratra labozia mibilaogy
Brezila mitaratra labozia mibilaogy
Model No.: Brazil
Ny pensilihazo mamaritra ny mari-pamantarana Thermoplast dia amina sary sokitra vita amin'ny synthetic, glass beads, pigments, fitaovana famonosana, fanampiny, sns.
Ny hodi-kevitry ny synthetic dia manana ny plastika, mametraka haingam-paty mafana sy matevina mafy amin'ny lalana eny amoron-dalana.
Ny fanampiana ao amin'ny loko dia afaka mampitombo ny plastika amin'ny loko, ary mahatonga azy ho mafy orina amin'ny fanindronana, ny loto sy ny loko marefo.
Pigment: loko sy fotsy ny loko iraisan'ny làlana. Ny pigment tena fotsy dia dioxide titanika, oksidina zinc ary lithopone, raha ny vorona mavo kosa dia ny lanjan'ny loko marefo indrindra.
Ny fitaovam-pako, toy ny famenoana nampidirina ao anaty loko, dia miantoka ny hery matanjaka, mitafy fanoherana, ary loko ny loko loko. Ny habetsaky ny isam-bolana dia hisy fiantraikany amin'ny liquidity sy ny fisotroana, ary koa ny fanodinana azy.
Ampiana entana vita amin'ny gilaodina mba hanatsarana ny famantarana ny tsipika amin'ny alina, hanatsarana ny famirapiratana sy ny faharetan'ny marika. Ny labozia vita amin'ny glasy dia baolina tsy misy loko sy mangarahara, manana fetran'ny lamosin'ny hazavana, mifantoka amin'ny fitarihana sy fitarihana. Ny kofehy vita amin'ny miangona eo am-pandrefesana na atokana mandritra ny loko dia afaka maneho ny jiro fiara amin'ny mason'ny mpamily, ka manatsara ny fahitana azy.
Standard Glass Beads AUSTRIANA TYPE A Contact Now
Standard Glass Beads TYPE B Contact Now
Aostralia / Zavamaniry Zavamaniry Zanatany vaovao TYPE C Contact Now
AS / NZS CH-003 TYPE D Glass Beads Contact Now
JIS R3301-1 Fitsipika fantsom-baravarankely Contact Now
Ny mari-pamantarana baoritra any Brezila Brazil Pavement Markings Fitsipika momba ny lalana mankany Brezila Fampahalalana momba ny lozam-pifamoivoizana any Brezila Galss Perles ho an'ny mari-pamantarana mirindra Ny fitaovana maoderina Glass Microspheres Ireo endri-pirahalahiana vita amin'ny ravina Eoropa Fanoroana vatosoa vita amin'ny glasy